Isicocisi somoya semoto-iShanghai FAUCI Technology Co., Ltd.
I-FAUCI Imoto yoMatshini yokubulala iintsholongwane kwi-FAQ
Impendulo: Krazula ifilimu yealuminium kwiphakheji kuqala, kwaye uthele zonke izinto zegranular kwimbiza yesilinda enobubanzi obuncinci. Emva koko, beka isiciko sebhokisi yesilinda enobubanzi obukhulu kumzimba webhotile, cofa uqinise kude kubekho isandi "cofa", kwaye ujonge ukuba yonke imveliso ibotshelelwe ngokuqinileyo, emva koko ingabekwa apho kufuneka isetyenziselwe khona;
Kubekwe ikakhulu emotweni ukubulala iintsholongwane kunye nokucoca umoya emotweni ngexesha lokwenyani, ukubulala ngokuqhubekayo ukubola kweentsholongwane kunye nokubumba kumphezulu wemoto, ukubola kunye nokususa ivumba elifunekayo kunye nee-VOCs;
Inokubekwa kwiidesika, iitafile zenkomfa, iitafile zokufundela amagumbi, iidesika zabafundi, okanye zihanjiswe nawe ukubulala iintsholongwane zomoya kufutshane ngexesha lokwenyani;
CanIngafakwa kwiibhokisi zokudlala, kwiibhokisi zonikezelo, kwiibhokisi zokugcina, nakwigumbi lokugcina izinto ukuze kuqhubeke inzalo kunye nokubulala iintsholongwane kwizinto ezikuzo.
Impendulo: Okwangoku, uninzi lweemveliso ezifanayo kwintengiso zisebenzisa ixabiso eliphantsi le-sodium hypochlorite (Oko kukuthi, izinto ezingafunekiyo ze-Disinfectant 84), evelisa i-asidi ye-hypochlorous ngokuphendula ngamanzi, emva koko ivelise i-chlorine dioxide kunye nenani elincinci zerhasi eyityhefu yeklorini (Uxinzelelo lwechlorine ludinga kuphela ukufikelela kuxinzelelo lwe-0.001 mg / L ukwenza ityhefu engapheliyo, ngoko ke i-asidi ye-hypochlorous ayinakusetyenziselwa ukubulala iintsholongwane emoyeni), okanye usebenzise ngokuthe ngqo ixabiso eliphantsi elifanayo le-chlorine dioxide yokufunxa amanzi ukukhupha i-chlorine dioxide. Xa umoya ofumileyo uphezulu kakhulu, uxinizelelo lunokukhutshwa ngokukhawuleza, kunye nokuncipha kuya kusilela kwithuba elifutshane.
Izinto ezakhelwe ngaphakathi kwi-FAUCI AAPG kwimathiriyeli ye-FAUCI yemoto yokubulala iintsholongwane yamkela itekhnoloji ye-ROS esebenzayo ye-oksijini kunye ne-bactericidal factor itekhnoloji yokukhululwa kancinci ngokuzimeleyo eyenziwe yinkampani yethu, enokuthi icothise kwaye ikhuphe ngokuzinzileyo nangokukhuselekileyo nangokufanelekileyo i-chase ye-chlorine dioxide kunye ne-ROS ioksijini esebenzayo. ixesha elide.
Dis Into yokubulala iintsholongwane kwi-FAUCI imoto yokubulala iintsholongwane yicocekile yegesi yeklorini dioxide kunye ne-ROS oxygen esebenzayo, ene-disinfection ephezulu esebenzayo kunye nokhuseleko; Ngelixa ezinye iimveliso zingenayo i-ROS oksijini esebenzayo, kwaye kunokubakho i-gaseous hypochlorous acid, iklorine kunye nezinye izinto eziyityhefu ezingavunyelwanga kukunxibelelana kwabantu, ezingaphelelanga nje ekusebenzeni kakuhle kwe-disinfection, kodwa zikwanomngcipheko wokhuseleko;
② I-FAUCI imoto yomoya isibulali-zintsholongwane sisebenza ngokuqhubekayo kangangeenyanga ezi-3, ngelixa ezinye iimveliso zisezona zinyanga zi-1-2 kuphela.
Kwangelo xesha, i-FAUCI imoto yomoya isibulali-zintsholongwane (eyakhelwe-ngaphakathi kwi-FAUCI AAPG) siphumelele uvavanyo olufanelekileyo lwe-CMA / CNAS: isiphelo sovavanyo lokutyhefu esinobungozi sibonisa ukuba asiyityhefu; ukuvavanywa kweseli micronucleus kuko konke okungalunganga, oko kuthetha ukuba akukho kuguquka kweseli kwaye akukho tyhefu yemfuza;
Ndisafuna ukunxiba isigqubuthelo sobuso ukuba ndibeka le nqwelo mafutha ecaleni kwam?